about contribute activities contact disclaimer archive home Health Education & Prevention For Better Tomorrow
हिजो आज तपाई हामीले फेसबूक र यूट्युबहरुमा प्राय: जसो #icebucketchallenge भन्दै मानिसहरु बाल्टीमा आइस (बरफ) र पानी राख्दै खनाइरहेको देखिरहेका छौँ । र यस चुनौतीलाई प्रसिद्ध हस्तीहरु देखि लिएर सर्वसाधारणले स्वीकारेको देखिन्छ ।
के हो त यो आइस बकेट च्यालेन्ज? ALS को बारेमा चेतना फैलाउनको लागि कसैले एक (वा त्यो भन्दा धेरै) चिसो बरफ पानी आफ्नो शरीरमा खनाउने गर्द्छन र आफ्ना परिवारजनहरु वा साथीहरुलाई त्यस्तै गर्न चुनौती दिइन्छ । र यदि त्यस्तै गर्न नसकेमा सो व्यक्तिले ALS संस्थालाई $१०० चन्दाको रूपमा बुझाउनु पर्छ भनेर चुनौती राखिन्छ ।
र ALS भनेको के हो त ? ALS अर्थात Amyotrophic lateral sclerosis (अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस) जसलाई
—2months ago #als #ice bucket challenge #strikeoutals #health #nepali इबोला भाइरस रोग : कस्तो रोग हो यो ?
पहिलो पटक सन् १९७६मा सुडान र कोङ्गोमा देखा परेको इबोला भाइरस रोग हाल आएर यसै २०१४ सालको मार्च महिना देखि पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकहरुमा पुन: देखा परेको छ । गिनिया, लाइबेरिया, सियरा लियोन र नाइजेरियामा गरी करिब ९०० भन्दा बढी ज्यान लिइसकेको यस इबोला भाइरस अन्य मुलुकहरुमा फैलिदैँ गएकोले विश्व स्वास्थ्य संघले यसलाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा जन-स्वास्थ्यको लागि आपत्कालिन स्वास्थ्य समस्याको रुपमा घोषणा पनि गरेको छ ।
तर यो कुनै रहस्यमय रोग भने हैन! इबोला भाइरसबाट सङ्क्रमित चिम्पान्जी, चमेरा जस्ता जनावरको सम्पर्कबाट मानिसमा सरेको यस भाइरस अहिले आएर सङ्क्रमित मानिस देखि अर्को मानिसमा रगत, पसिना, र्‍याल, खकार, दिशा-पिसाब जस्ता शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ बाट फैलने गर्दछ ।
साथै यस भाइरस Read more
—2months ago with 1 note #ebola virus #nepali #information